Impact Branding & Design dia nametraka ity sary mahafinaritra ity, Ny fizotry ny varotra miditra izay mamintina ny fizotry ny varotra miditra amin'ny dingana 6. Ny marketing inbound dia dingana sarotra - misy fiankinan-doha maro eo anelanelan'ny fantsona, noho izany dia tsy mora ny mahazo dingana tsorina amin'ny fomba tsotra toa an'io.
Ny hany fanampiko dia ny fanandramana ary ny loop avy amin'ny dingana 6 mankany amin'ny dingana 1. Ny marketing anaty dia mitaky fanandramana mba hahazoana antoka fa ny ezaka lehibe ampiharinao dia misy fiatraikany marina ary manandrana hafatra samihafa, fantsona samihafa ary tolotra samihafa ianao. Ny sombin-javatra tsy hita hafa dia ny loop avy amin'ny fandrefesana ka hatramin'ny fanatsarana ny paikadim-barotrao. Ny famaritana izay mety dia tokony handroaka ny ezaka ataonao amin'ny marketing!
30 Nov 2012 amin'ny 5:46 maraina
Miditra tanteraka ny marketing amin'ny Internet.
Mitady ny vahaolanao ny olona rehefa mitady amin'ny Internet. Tian'izy ireo
fampahalalana mifandraika amin'ny zavatra tadiavin'izy ireo. Nanasa izy ireo
ny mpivarotra eo am-baravarany.